လိုအပ်ချက်မြင့်မားတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေအတွက် သိကောင်းစရာ (၉)ချက် - Chit MayMay
Home Parent Guide လိုအပ်ချက်မြင့်မားတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေအတွက် သိကောင်းစရာ (၉)ချက်
လိုအပ်ချက်မြင့်မားတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေအတွက် သိကောင်းစရာ (၉)ချက်
မိဘတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားလိုက်ရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းပေါင်းများစွာ မေးမိပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ- ငါတို့ရဲ့ကလေးက အေးအေးဆေးဆေးရှိပါ့မလား? သူတို့စရိုက်က သူတို့အမေနဲ့ ပိုတူမလား? အဖေနဲ့ပိုတူမလား?ဆိုတာတွေကို တွေးမိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတိုင်းက မတူကြပါဘူး။ တစ်ချို့က အခြားသူတွေထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်မှု လိုအပ်တတ်ပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့ အခြားအရွယ်ရောက်သူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကို အမြဲတမ်း လိုအပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲ လိုအပ်ချက် မြင့်မားတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ မိဘတွေအတွက် အကြံပြုချက်တွေကို လေ့လာထားရပါမယ်။
မရမနေတောင်းဆိုတတ်တဲ့ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း>>>
လိုအပ်ချက် မြင့်မားတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းက မကျန်းမာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့မှာ အခြားကလေးတွေနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားချက်တွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုက ပိုမြန်ပြီး သူတို့ရဲ့အာရုံခံမှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုတွေ ပိုလိုအပ်နေလို့ပါ။
သူတို့လေးတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ကျေနပ်အားရမှုမရှိပါဘူး။ သူတို့ဟာ သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုနဲ့ အဆက်မပြတ် ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို လိုအပ်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဘယ်လောက်ပဲ အာရုံစိုက်မှု၊ ချစ်ခင်မှု ပေးနေပါစေ၊ သူတို့လုံးဝကျေနပ်အားရမှုမရှိပါဘူး။
သူတို့ဟာ ဂနာမငြိမ်တတ်တဲ့ ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စိတ်က အမြဲတမ်းအလုပ်များနေပြီး ဘာမဆိုလုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်၊ သူတို့ဟာ မိဘတွေနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုရချင်ကြသော်လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေရတာကိုလည်း ကြိုက်ကြပါတယ်။
မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ သူတို့က သင်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာတွေကို မကြာခဏ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
သူတို့က အာရုံစိုက်မှုကို အမြဲတမ်းရှာနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့တောင်းဆိုတာကို ပေးလိုက်ပြီးတာနဲ့ အခြားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ပေးဖို့ သင့်ကို ချက်ချင်းလိုအပ်တတ်ပါတယ်။
ညဘက်မှာလည်း မကြာခဏ နိုးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့တစ်ရေးတစ်မောအိပ်ဖို့ အရမ်းခက်ပါတယ်၊ အိပ်ပျော်သွားရင်လည်း ခဏတဖြုတ်ပါပဲ။
သူတို့က ခွဲခွာရမှာကို ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ မိဘတွေ သူတို့နားက ထွက်သွားတာကိုမြင်ရင် ထိတ်လန့်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့မိဘတွေက သူတို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို လိုက်လျောပြီး သူတို့လိုအပ်တာတွေကို ဂရုစိုက်ပေးတဲ့သူတွေမို့ပါ။
နို့စို့အရွယ်လေးတွေဆိုရင် အမေနို့ကို မကြာခဏ ရှာတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့က အစာအာဟာရအတွက်သာမက စိတ်ချမ်းသာစေဖို့လည်း ဒီလိုလုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ နို့ဘူးနဲ့ နို့စို့ပြီးရင်တောင် စိတ်ငြိမ်ဖို့ pacifier လိုအပ်နေတတ်ပါတယ်။
သူတို့ငိုရင် အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ မရပ်မနားအောင်ဟစ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အားအင်များစွာနဲ့ ဆန္ဒပြကြပြီး အဆက်မပြတ် တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
လိုအပ်ချက် မြင့်မားသော ကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေအတွက် အကြံပြုချက်များ
ဒီကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေဟာ အများအားဖြင့် ဒီအပြုအမှုတွေ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသလဲ?၊ ဘာလုပ်သင့်လဲ? ၊ ဘာမလုပ်သင့်ဘူးလဲ? ဆိုတာကိုလမ်းညွှန်ဖို့ အဖြေကို ရှာဖွေလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီအရာက ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး၊ ကလေးရဲ့သဘာဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။ မိဘတွေအနေနဲ့ ဒီအကြံပြုချက်တွေကို လိုက်နာရင် ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေရဲ့ ပြင်းထန်မှု လျော့နည်းသွားလိမ့်မယ်။
၁။ အခြားကလေးတွေ၊ မောင်နှမတွေနှင့် နှိုင်းယှဉ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီက ထူးခြား၊ ကွဲပြားပါတယ်။ ဒါက သူတို့ကို သီးသန့်ဖြစ်စေတဲ့အရာပါ။ သင့်ကလေးလေးတွေကို နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ self-esteem ကိုပျက်စီးစေပါတယ်။
၂။ သူတို့လိုအပ်တဲ့ အချိန်ကိုပေးပါ၊ သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို ဂရုစိုက်ပေးပါ
ဒါက သူတို့ကို စိတ်အေးချမ်းစေပြီး လုံခြုံမှု ပေးပါလိမ့်မယ်။
၃။ သူတို့ရဲ့စရိုက်ကို ပြောင်းဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့
သူတို့ရဲ့စရိုက်ကို ပြောင်းဖို့ကြိုးစားရင် သူတို့ကို ပင်ပန်းစေပါလိမ့်မယ်။ ထိုအမူအကျင့်က သူတို့ရဲ့ပုံစံနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကလေးနဲ့ပဲ ချစ်ခင်မှုရဖို့၊ ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးရဖို့ ကြိုးစားပါ။
၄။ အကြမ်းဖက်မှုကို ဘယ်တော့မှ မသုံးပါနဲ့
ရိုက်တာမျိုး၊ နာကျင်စေတဲ့ စကားလုံးတွေ သုံးတာမျိုးဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့အဆိုးဘက်ကိုသာ အားဖြည့်ပေးသလို ဖြစ်စေပြီး ပုန်ကန်တဲ့ အပြုအမှုမျိုး ပြုလုပ်လာစေပါတယ်။
၅။ သူတို့ရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အပြုအမှုကို အမြဲအားပေးပါ
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အပြုအမူတွေ (သို့) စကားစုတွေနဲ့ သူတို့လေးတွေက အရမ်းကောင်းမွန်ကြောင်း ပြသပါ။
၆။ သူတို့လိုချင်တာမှန်သမျှ မပေးပါနဲ့
ကလေးတွေဟာ အရမ်းထက်မြတ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သင့်ကိုခြယ်လှယ်ဖို့ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပါလိမ့်မယ်။
၇။ သင့်ကလေးနဲ့ စကားများများပြောပါ
သင့်ကလေးနဲ့ စကားစမြည်ပြောပါ။ သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ သူတို့ဘယ်လိုခံစားရကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပြုပါ။
၈။ အလိုမကျဖြစ်ခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ မေတ္တာထားပြီး တည်ငြိမ်စွာ ပြုမှုပါ
ဝုန်းဒိုင်းကြဲခြင်းကို ပြတ်ပြတ်သားသား တုံ့ပြန်ပါ၊ သို့သော် အေးအေးဆေးဆေးနည်းလမ်းနဲ့ တုံ့ပြန်ပေးပါ။
၉။ သင်ပင်ပန်းနေရင် အကူအညီတောင်းပါ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပါက စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေဖျောက်ဖို့ သင့်လက်တွဲဖော် (သို့) မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်ဆီမှာ အကူအညီတောင်းပါ။ ကျွန်မတို့အားလုံးက လူသားတွေဖြစ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ တည်ငြိမ်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုမဖြစ်ခင်မှာ အကူအညီတောင်းတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
Previous articleသင်ကြားဖူးချင်မှ ကြားဖူးလိမ့်မယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရဲ့ မထင်မှတ်ထားသော လက္ခဏာ (၈)ခု
Next articleညဘက်တွေမှာ ကလေးငယ်တွေ လွယ်လွယ်အိပ်ပျော်စေမယ့် အချက် (၁၀) ချက်